Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo Arbaca ah cod u qaadi doona dacwadaha la doonayo in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump.
Kulan ay ku yeelan doonaan xarunta Aqalka ee magaalada Washington D.C ayay dhamaan xubnaha Aqalka Wakiilada cod u qaadi doonaan laba qodob oo dastuuri ah oo ay u kucsanayaan xil-ka-xayuubinta madaxweynaha.
Qodobada xil-ka-xayuubinta ayaa madaxweyne Trump ku eedeynaya inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa, isaga oo dowlad shisheeye oo ah Ukraine u adeegsaday inay fara-geliso doorashada 2020, iyo inuu hor-istaagay baaritaanka ay congress-ka ku sameynayeen arrintan.
Haddaba arrimahaan ayaa wariyaheenna Minnesota, Maxmuud Mascadde uu ka wareystay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala magaalada Minneapolis.
Halkaan ka dhageyso wareysiga Amin Harun